Iindaba - Imakethi ye-graphite electrode yamva nje (7.18)
Intengiso ye-graphite electrode yamva nje (7.18)
Amaxabiso eemarike ze-elektrodi ze-China ahlala azinzile kule veki. Kuyaqondakala ukuba ngenxa yokwehla okuqhubekekayo okuthe xhaxhe kwi-sulphur petroleum coke ephantsi kunye nenyani yokuba ezinye izixhobo zentsimbi ezisezantsi ze-graphite electrode zinexabiso elincinci lesitokhwe se-graphite electrode, izixhobo zentsimbi ezisezantsi zinokulinda- kwaye- jonga isimilo ekuthengweni kwee-electrode zegraphite. Ixabiso lentengiselwano ngeveki yemakethi ye-graphite electrode isabhidekile kancinci.
Ngokwamaxabiso: kule veki, elona xabiso liqhelekileyo lee-electrite ze-graphite e-China enobubanzi be-300-600mm: amandla aqhelekileyo 16000-18000 yuan / ton; ephezulu-amandla 18000-21500 yuan / ton; amandla aphakamileyo aphezulu 21000-28000 yuan / itoni; amandla aphezulu e-700mm e-graphite electrode 32000 -33,000 yuan / itoni. Isalathiso sexabiso semarike ye-elektroniki ye-graphite ye-22286, efanayo naleyo yexesha elifanayo kwiveki ephelileyo kunye nexesha elifanayo kwinyanga ephelileyo. Ixabiso lenyuke nge-42.79% ukusukela ekuqaleni konyaka kunye ne-55.77% ukusuka kwangelo xesha linye kunyaka ophelileyo.
Icala lokufunwa: China intsebenzo yecala lemarike ye-elektrode yentsebenzo esecaleni ibuthathaka kule veki. Ngokwengxelo evela kwezinye iinkampani ze-graphite electrode, izixhobo zentsimbi ezisezantsi ze-graphite electrode bezisecaleni kokuthengwa kwe-electrite ye-electrode kule veki, kwaye iinkampani ze-graphite electrode zichaze ukuba ukuthunyelwa kwabo kuhamba kancinci. Nangona kunjalo, i-avareji yokuqalisa kwezityalo zesekethe ezantsi ezantsi zeegraphite grafayithi isephezulu, kwaye imfuno yeegraphite grafayithi isekhona.
Ixesha Post: Jul-19-2021
Imarike China grafayithi electrode a ...
Ukunyuka kwamaxabiso e-coke yenaliti ngoJulayi, ukwehla ...